တစ်ဦးအာမခံအေးဂျင့်နှင့်အမျှပိုမိုကော်မရှင်ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး၏ Dynamics ကို
တစ်ဦးအာမခံကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာခြင်း သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာသိသိသာသာဝင်ငွေဝင်ငွေမှလိုအပ်သောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၌ထားရန်ဆန္ဒရှိနေလျှင်သို့မဟုတ်အရောင်းစာရေးအတော်လေးလွယ်ကူပြီးအလွန်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ပါသည်. အပြင်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှ, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်း, နှင့်ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း, အာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍသင်တစ်ဦးအာမခံအေးဂျင့် / အရောင်းစာရေးသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်အေဂျင်စီအဖြစ်ကောင်းသောငွေရှာနိုင်ပါတယ်တယောက်ဧရိယာသည်.
တစ်ဦးအာမခံအေးဂျင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအဓိကစိန်ခေါ်မှုကရောင်းအားအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်. သင်ရောင်းဖို့ယျစိတ်ဝင်စားမဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ဖောက်သည်များအတွက်အလားအလာမှထွက်သွားရကြမည် - အာမခံအဖုံး. လူအများစုဟာအာမခံလွှမ်းခြုံ ပတ်သက်. သံသယဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကလိမ်လည်မှုမှတ်, နှင့်ဤ skeptism အာမခံ salesmen မှသက်တမ်းတိုး. အများစုမှာအာမခံအေးဂျင့်အခန်းတံခါးခေါက်နှင့်နေရာတိုင်းကလူချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်အအေးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရန်ရှိသည်; သူတို့ကအများအားဖြင့် "no" ဆိုတဲ့အဖြေဘို့ထက် "ဟုတ်ကဲ့" get.
ဒါဟာမော-နှလုံးအတှကျမဟုတျပါဘူး, သငျတို့သစော်ကားခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေမှုကိုအငြင်းအစာအိမ်ဒါမှမဟုတ်လတစ်လရဲ့အဆုံးမှာသင့်ရဲ့လစာနှင့်ကော်မရှင်ဝင်ငွေမှဖြုန်းရှင်းလင်းချက်တွေအများကြီးနှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်. နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုသင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုစျေးကွက်မှမျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည် - တရားနှင့်သစ္စာတရားကိုကပြောသည်ခံရ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိလူများကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့ခြေကုပ်ရဖို့သူတို့နှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးက.
တစ်ဦးအာမခံအေးဂျင့်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုကောင်းသောအရာသင်တဦးတည်းဖြစ်လာမှပညာရှင်ပီသစွာသို့မဟုတ် Academic အရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးကြောင့်. မည်သူမဆိုတစ်ဦးအာမခံအေးဂျင့်ဖွစျလာနိုငျ. အများစုမှာအာမခံအေးဂျင့်ဆိုတရားဝင်ပညာရေးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ထိုသို့ဟုတ်မှန်သည် အာမခံကု​​မ္ပဏီများက လျှောက်ထားဘွဲ့ရဖြစ်ရန်အဘို့အရန်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအာမခံအေးဂျင့်မှသာကောလိပ်သို့မဟုတ်အထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရများမှာ.
အခြေခံသမ္မာတရားကိုအများဆုံးအာမခံကု​​မ္ပဏီတွေကသူတို့ salespeople အဖြစ် employ အလားအလာအေးဂျင့်ဘို့အပြည်တွင်းရေးလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးကတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရသို့မဟုတ်အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းထွက်ရှိမရှိဒါဟာအရေးမပါဘူး, သို့မဟုတ်အခြားအာမခံကု​​မ္ပဏီများနှင့်အရောင်းအတွေ့အကြုံရှိသည် - သငျအလုပျလုပျသို့မဟုတ်လယ်ပြင်သို့ထွက်ကိုစလှေတျမီသင်ဆဲအသစ်ရဲ့အလုပ်ရှင်အားဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်. သငျသညျ US မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျပြည်နယ်စာမေးပွဲလွန်ရန်လိုအပ်ပေမည်နှင့်သင်တစ်ဦးအာမခံအေးဂျင့်အဖြစ်ကျင့်သုံးမီကလိုင်စင်ရရ.
အလားအလာရှိသောအလုပ်ရှင်သင်၌မြင်ချင်သောသာအရည်အသွေးတွေ, နှင့်သင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အောင်မြင်ဖို့ကြသည်လိုအပ်ပါတယ်: တစ်ဦးအပြုသဘောစိတ်ဝိညာဉ်အား, တစ်ဦး extrovert သဘောထားကို, ထုတ်ဝေမှုကိုအငြင်းကိုင်တွယ်နှင့်လူများစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်စွမ်း, တစ်ဦး tenacious စိတ်ဝိညာဉ်အား, နှင့်အရောင်းအပေးအယူ pitching နှင့်ပိတ်ပြီးတစ်ဗီဇ. သင်တို့သည်ဤအရညျအသှေးရှိသည်နှင့်သင်အောင်မြင်ဖို့ကိုလည်းစုပ်ယူလေ့ကျင့်ရေးသင်ခန်းစာတွေလက္ခဏာကိုပြသရည်မှန်းချက်ကြီးမားနေတဲ့အခါမှာ, ထို့နောက်အလုပ်ရှင်များသငျသညျငှားရမ်းရှေ့၌သင်တို့အရည်အချင်းများကိုစဉ်းစားမည်မဟုတ်.
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, ကအာမခံအေးဂျင့်များအကြီးအကျယ်ကော်မရှင်နှင့်မလစာပေးဆောင်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြရမည်ဖြစ်သည်. တစ်ဦးကအလုပ်ကြိုးစားတဲ့အာမခံအရောင်းစာရေးလစာနှင့်အတူထက်ကော်မရှင်နှင့်ပိုမိုရရှိမည်, နှင့်ဤအလုပ်၏တပြင်လုံးကိုအနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်. သငျသညျဝင်ငွေပမာဏကိုသင့်ရဲ့ပြည်နယ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံအပေါ်မူတည်, သငျသညျအနိုင်ရဖောက်သည်တစ်ဦးလျှင်သင့်ရဲ့ကော်မရှင်များ၏အစုရာခိုင်နှုန်း, သငျတို့သအပတ်တိုင်းသို့မဟုတ်တစ်လအသစ်ဖောက်သည်အနိုင်ရနိုင်ကြသည်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်း. သို့သော်အမေရိကန်တွင်, တစ်ဦးအလုပ်ကြိုးစားတဲ့အာမခံကိုယ်စားလှယ်တစ်နှစ်လျှင် $ 100K ၏ပျမ်းမျှရရှိ, နှင့်အရာတစ်ခုခုသည်.
အပြင်ကော်မရှင်မှ, တချို့အေးဂျင့်ကိုလည်းမသွားသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အခြေခံအကျဆုံးလစာရ. ဒါဟာအေးဂျင့်ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကွံဉာဏျနှင့်အတူဖောက်သည်ကူညီပေးသည်ဘယ်မှာအတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုမှငွေရှာဖို့လည်းဖြစ်နိုင်. ဖောက်သည်များနှင့်အလုပ်ရှင်များနှစ်ဦးစလုံး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ထမ်းဆောင်စဉ်ကဤဝန်ဆောင်မှုစွဲချက်ကိုယ်တော်တိုင်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့အေးဂျင့်ကူညီခြင်းအတွက်ရှည်လျားသောလမ်းသွား.
အားဖြင့် Bhose June 10, 2013
အားဖြင့် Bhose August 1, 2013
ထိပ်တန်း 10 Mistakes You Must Avoid ...
အားဖြင့် Bhose April 26, 2015